सेलपेको नयाँ अफर स्यामसुङ मोबाइल उपहार
नेपाल लाइभ शुक्रबार, चैत ७, २०७६, ११:५५
काठमाडाैं- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक सेलकम प्रा.लि.को सेलपे सेवाले नयाँ योजना ‘२०२०-एस २०' अफर आफ्ना ग्राहकहरुका लागि सुरु गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत लक्की 'ड्र'मार्फत् कुनै एक भाग्यशाली विजेताले एउटा नयाँ स्यामसुङ ग्यालेक्सी एस २० माेवाइल जित्ने मौका पाउने छन्। यो योजना चैत्र ७ गतेदेखि चैत्र २७ गतेसम्म लागू हुनेछ।
यस योजनामा सेलपेका ग्राहकहरुले न्युनतम रु २० को कुनै पनि कारोवार रिचार्ज, युटिलिटी पेमेन्ट (मर्चेन्ट भुक्तानीबाहेक) गरे लक्की ड्रको लागि एउटा कोड नं. पाउनेछन्। सो कोड नं. लक्की ड्रको लागि छनोट हुनेछ। सोहि कोडबाट लक्की ड्रमार्फत् कुनै एक भाग्यशाली ग्राहकले एउटा नयाँ स्यामसुङ माेबाइल जित्ने मौका पाउनेछन्।
यस्का साथै ७ जना भाग्यशाली ग्राहकहरुले हरेक हप्ता पे लेस एड्रेस लञ्च र एक्स एजबाट विभिन्न उपहारहरु पाउने छन्। यो योजना नयाँ तथा पुराना दुवै ग्राहकहरुको लागि लागू हुनेछ। जस्मा नयाँ ग्राहकहरुले सेलपे एप्प डाउनलोड गरेर आफ्नो बैंक खाता लिंक गरे पश्चात न्युनतम रु २० को कुनै पनि कारोबार रिचार्ज, युटिलिटी पेमेन्ट गरी यस योजनामा सहभागी हुन पाउने छन्।
सेलपे सेवा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेशन दुवै माध्यमबाट उपयोग गर्न सकिने अत्यन्तद्रुत, सरल तथा सुरक्षित सेवा हो। सेलपेका अन्यविशेषताहरु यस प्रकार रहेक‍ा छन्।
- बिनावालेट कारोबार गर्न सकिने
- मर्चेन्ट शूल्क नलाग्ने
- लोयल्टी पोइन्टस
सेलपेद्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवा, विजुली, खानेपानी, टिभी, इन्टरनेटको महसुल भुक्तानी, विभिन्न पसल, रेष्टुरेण्टमा भुक्तानी, एक बैंक खाताबाट अन्य बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण, स्वदेशभित्र गरिने मनी ट्रान्सफर, P2P, P2B, B2P, B2B आदि वास्तविक समयमा गर्न सकिन्छ।
यस सेवामार्फत् हुने सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् हुनेछ। सेलपे सेवासँग आबद्ध भएका बैंकहरुका ग्राहकहरुले सहज रुपमा यो सेवा लिन सक्नेछन्। सेलपे सेवा गुगल प्लेस्टोर तथा एप्पल एप्प स्टोरमा उपलब्ध छ।
सुशील भट्टको रिट मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको इजलाशमा